Usoro ojiji - BikeHike
Usoro na ọnọdụ ndị a na-achịkwa ojiji niile webụsaịtị bikehike.org yana ọdịnaya, ọrụ na ngwaahịa niile dị na ma ọ bụ site na webụsaịtị (ewekọtara ọnụ, weebụsaịtị). Weebụsaịtị ahụ bụ igwe igwe igwe (“bikehike”) nwe ma na-arụkwa ya. A na-enye webụsaịtị ahụ dabere na nnabata gị na-enweghị mgbanwe nke usoro na ọnọdụ dị n'ime ebe a yana iwu ndị ọzọ na-arụ ọrụ, atumatu (gụnyere, enweghị mmachi, Amụma nzuzo nke igwe kwụ otu ebe) na usoro enwere ike ibipụta site n'oge ruo n'oge na Saịtị a site na. bikehike (mkpokọta, "Agreement").
Biko gụọ Nkwekọrịta a nke ọma tupu ịbanye ma ọ bụ jiri weebụsaịtị. Site na ịnweta ma ọ bụ iji akụkụ ọ bụla nke webụsaịtị, ị kwenyere na ị ga-ejide ya na usoro na ọnọdụ nke nkwekọrịta a. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na usoro na ọnọdụ niile nke nkwekọrịta a, ị gaghị enwe ike ịnweta weebụsaịtị ma ọ bụ jiri ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na a na-ahụta usoro na ọnọdụ ndị a dị ka onyinye nke igwe igwe kwụ otu ebe, nnabata nwere oke na usoro ndị a. Weebụsaịtị ahụ dị naanị maka ndị ọ dịkarịa ala afọ 13.
Akaụntụ na saịtị gị bikehike.org. Ọ bụrụ na ịmepụta blọọgụ/saịtị na weebụsaịtị, ọ bụ gị na-ahụ maka idobe nchekwa nke akaụntụ na blọọgụ gị, na ị na-ahụ maka ọrụ niile na-eme n'okpuru akaụntụ yana omume ọ bụla ọzọ emere na blọọgụ. Ị gaghị akọwa ma ọ bụ kenye mkpụrụokwu na blọọgụ gị n'ụzọ aghụghọ ma ọ bụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị, gụnyere n'ụzọ ezubere ịzụ ahịa na aha ma ọ bụ aha nke ndị ọzọ, igwe igwe kwụ otu ebe nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ wepụ nkọwa ma ọ bụ isiokwu ọ bụla nke ọ na-ewere na ezighi ezi ma ọ bụ iwu na-akwadoghị, ma ọ bụ Ma ọ bụghị ya, ọ nwere ike ịkpata ụgwọ igwe kwụ otu ebe. Ị ga-emerịrị ọkwa ozugbo maka igwe kwụ otu ebe maka ojiji blọọgụ gị, akaụntụ gị ma ọ bụ mmebi ọ bụla ọzọ na-akwadoghị. igwe kwụ otu ebe agaghị akwụ ụgwọ maka omume ma ọ bụ mpụ ọ bụla nke Gị, gụnyere mmebi ọ bụla nke ụdị ọ bụla kpatara n'ihi omume ma ọ bụ mwepu.
Ọrụ nke ndị ntinye aka. Ọ bụrụ na ị na-arụ blọgụ, kwuo okwu na blọọgụ, biputere ihe na weebụsaịtị, bipute njikọ na weebụsaịtị, ma ọ bụ mee (ma ọ bụ kwe ka ndị ọzọ mee) ihe dị site na weebụsaịtị (ihe ọ bụla, "Ọdịnaya" ), Ọ bụ gị na-ahụ maka ọdịnaya nke, yana nsogbu ọ bụla sitere na ọdịnaya ahụ. Nke ahụ bụ ikpe n'agbanyeghị ma Ọdịnaya a na-ajụ ajụjụ ọ bụ ederede, eserese, faịlụ ọdịyo, ma ọ bụ ngwanrọ kọmputa. Site n'ime ka Ọdịnaya dị, ị na-anọchi anya ma nye ikike na: nbudata, nnomi na ojiji nke Ọdịnaya agaghị emebi ikike nwebisiinka, gụnyere mana ọnweghị oke na nwebisiinka, patent, ụghalaahịa ma ọ bụ ikike nzuzo azụmaahịa, nke ndị ọzọ;
ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ nwere ikike ọgụgụ isi ị mepụtara, ị (ma) natara ikike n'aka onye were gị n'ọrụ ka ọ biputere ma ọ bụ mee ka Ọdịnaya ahụ dị, gụnyere ma ọnweghị oke na sọftụwia ọ bụla, ma ọ bụ (ii) chebere n'aka onye were gị n'ọrụ ka waiver ka ikike niile n'ime ma ọ bụ na Ọdịnaya;
ị kwenyere n'ụzọ zuru ezu na ikikere ọ bụla nke atọ metụtara Ọdịnaya, ma mee ihe niile dị mkpa iji gafere nke ọma iji kwụsị ndị ọrụ ọ bụla usoro achọrọ;
Ọdịnaya ahụ enweghị ma ọ bụ wụnye nje, ikpuru, malware, ịnyịnya Trojan ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ na-emerụ ahụ ma ọ bụ mbibi;
Ọdịnaya ahụ abụghị spam, abụghị igwe ma ọ bụ na-enweghị usoro, na enweghị ọdịnaya azụmaahịa na-adịghị mma ma ọ bụ nke achọghị iji kwalite okporo ụzọ gaa na saịtị ndị ọzọ ma ọ bụ bulie ogo njin ọchụchọ nke saịtị ndị ọzọ, ma ọ bụ iji mekwuo iwu na-akwadoghị ( dị ka phishing) ma ọ bụ duhie ndị nnata dị ka isi iyi nke ihe ahụ (dị ka ịfụfụ);
Ọdịnaya ahụ abụghị ihe na-akpali agụụ mmekọahụ, enweghị egwu ma ọ bụ kpalie ime ihe ike megide ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ihe dị iche iche, na ọ dịghị emebi ikike nzuzo ma ọ bụ mgbasa ozi nke ndị ọzọ;
a naghị akpọsa blog gị site na ozi eletrọnịkị achọghị dịka njikọta njikọta na nchịkọta akụkọ, ndepụta email, blọọgụ ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ, na usoro nkwalite ndị a na-akwadoghị;
akpọghị blog gị n'ụzọ ga - eme ka ndị na - agụ akwụkwọ gị chee na ị bụ onye ọzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Iji maa atụ, URL ma ọ bụ aha blọgụ gị abụghị aha onye ọzọ na-abụghị onwe gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-abụghị nke gị; na
ị nwere, n'ihe gbasara Ọdịnaya nke gụnyere koodu kọmputa, nkewaziri nke ọma na/ma ọ bụ kọwaa ụdị, ọdịdị, ojiji na mmetụta nke ihe ndị ahụ, ma ọ bụrụ na a rịọrọ ya site na igwe igwe ma ọ bụ ọzọ.
Site na ịnyefe ọdịnaya na igwe kwụ otu ebe maka ntinye na webụsaịtị gị, ị na-enye igwe kwụ otu ebe ikike zuru ụwa ọnụ, enweghị ikike na enweghị ikike imepụtagharị, gbanwee, imeghari na bipụta ọdịnaya naanị maka igosipụta, kesaa na ịkwalite blọọgụ gị. . Ọ bụrụ na ihichapụ Ọdịnaya, igwe kwụ otu ebe ga-eji ezi mbọ wepụ ya na webụsaịtị, mana ị kwenyere na caching ma ọ bụ ntụnye aka na ọdịnaya nwere ike ọ gaghị adị ozugbo.
Na-amachibidoghị nke ọ bụla n'ime ihe nnọchianya ma ọ bụ akwụkwọ ikike ndị ahụ, igwe kwụ otu ebe nwere ikike (n'agbanyeghị na ọ bụghị ọrụ) ka, n'ikike nke igwe kwụ otu ebe (i) jụ ma ọ bụ wepụ ọdịnaya ọ bụla nke, n'echiche ezi uche dị na igwe kwụ otu ebe, na-emebi iwu igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na-emerụ ahụ n'ụzọ ọ bụla. ma ọ bụ ihe na-adịghị mma, ma ọ bụ (ii) kwụsị ma ọ bụ jụ ịnweta na iji weebụsaịtị nye onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla n'ihi ihe ọ bụla, n'ikike igwe igwe kwụ otu ebe. igwe kwụ otu ebe agaghị enwe ọrụ inye nkwụghachi nke ego ọ bụla akwụburu.
Ịkwụ Ụgwọ na Ọhụrụ. Usoro izugbe.
Site na ịhọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ị kwenyere na ị ga-akwụ bikehike otu oge na/ma ọ bụ ụgwọ ndenye aha kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ (enwere ike itinye usoro ịkwụ ụgwọ mgbakwunye na nkwukọrịta ndị ọzọ). A ga-ana ụgwọ ndenye aha na ndabere akwụgoro ụgwọ ụbọchị ị debanyere aha maka nkwalite ga-ekpuchikwa iji ọrụ ahụ maka oge ndenye aha kwa ọnwa ma ọ bụ nke afọ dịka egosiri. A naghị akwụghachi ụgwọ.
Ọ gwụla ma ị gwa igwe kwụ otu ebe tupu ngwụcha oge ndenye aha na ịchọrọ ịkagbu ndenye aha, ndenye aha gị ga-emegharị ozugbo wee nye anyị ikike ịnakọta ụgwọ ndenye aha kwa afọ ma ọ bụ nke ọnwa maka ụdị ndenye aha (yana ụtụ isi ọ bụla) iji kaadị kredit ọ bụla ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ anyị nwere dekọrọ maka gị. Enwere ike ịkagbu nkwalite n'oge ọ bụla site n'itinye arịrịọ gị maka ịnya igwe na ederede.
Ọrụ. Ụgwọ; Ịkwụ ụgwọ. Site na ịdebanye aha maka akaụntụ ọrụ ị kwenyere ịkwụ ụgwọ igwe kwụ otu ebe ụgwọ ntọlite ​​kwesịrị ekwesị yana ụgwọ ugboro ugboro. A ga-anata ụgwọ ndị dị mkpa site n'ụbọchị arụrụ ọrụ gị yana tupu iji ọrụ ndị a. bikehike nwere ikike ịgbanwe usoro ịkwụ ụgwọ na ụgwọ n'ime ụbọchị iri atọ (30) tupu ọkwa edegara gị. Ị nwere ike ịkagbu ọrụ n'oge ọ bụla n'ime ụbọchị iri atọ (30) ederede ederede maka igwe kwụ otu ebe.
Nkwado. Ọ bụrụ na ọrụ gị gụnyere ịnweta nkwado email kacha mkpa. "Nkwado email" pụtara ikike ịrịọ arịrịọ maka enyemaka akaaka site na ozi-e n'oge ọ bụla (site na mbọ igwe kwụ otu ebe iji zaghachi n'ime otu ụbọchị azụmahịa) gbasara iji ọrụ VIP. “Ibu ụzọ” pụtara na nkwado na-ebute ụzọ karịa nkwado maka ndị ọrụ ọkọlọtọ ma ọ bụ ọrụ bikehike.org efu. A ga-enye nkwado niile dabere na omume, usoro na atumatu ọrụ ọkọlọtọ igwe igwe kwụ otu ebe.
Ọrụ nke ndị ọbịa webụsaịtị. bikehike enyochabeghị, enweghị ike nyochaa, ihe niile, gụnyere ngwanrọ kọmputa, ezigara na webụsaịtị, yabụ enweghị ike ibu ọrụ maka ọdịnaya, ojiji ma ọ bụ mmetụta nke ihe ahụ. Site na iji webụsaịtị ahụ, igwe kwụ otu ebe anaghị anọchi anya ma ọ bụ gosi na ọ kwadoro ihe e debere ebe ahụ, ma ọ bụ na ọ kwenyere na ihe dị otú ahụ ziri ezi, bara uru ma ọ bụ na-adịghị emerụ ahụ. Ọ bụ gị na-ahụ maka ịkpachara anya ka ọ dị mkpa iji chebe onwe gị na sistemu kọmputa gị pụọ na nje, ikpuru, ịnyịnya Trojan na ọdịnaya ndị ọzọ na-emerụ ahụ ma ọ bụ na-emebi emebi. Weebụsaịtị ahụ nwere ike ịnwe ọdịnaya na-akpasu iwe, na-adịghị mma, ma ọ bụ na-emegideghị ya, yana ọdịnaya nwere ezighi ezi teknụzụ, mperi ederede, na mperi ndị ọzọ. Weebụsaịtị ahụ nwekwara ike ịnwe ihe na-emebi iwu nzuzo ma ọ bụ ikike ọhaneze, ma ọ bụ mebie ikike ọgụgụ isi na ikike nwe, nke ndị ọzọ, ma ọ bụ nbudata, nnomi ma ọ bụ ojiji nke dabere na usoro na ọnọdụ agbakwunyere, kwuru ma ọ bụ ekwughị ya. bikehike na-ekwupụta ọrụ ọ bụla maka mmebi ọ bụla sitere na ojiji nke ndị ọbịa webụsaịtị ahụ, ma ọ bụ site na nbudata ọ bụla nke ndị ọbịa ọdịnaya biputere.
Ebisara ọdịnaya na weebụsaịtị ndị ọzọ. Anyị enyochabeghị, enweghịkwa ike inyocha, ihe niile, gụnyere ngwanrọ kọmputa, emere site na webụsaịtị na ibe weebụ nke jikọtara bikehike.org, yana njikọ ahụ na bikehike.org. igwe kwụ otu ebe enweghị njikwa webụsaịtị na ibe weebụ ndị ahụ na-abụghị igwe igwe, ọ bụghịkwa maka ọdịnaya ha ma ọ bụ ojiji ha. Site na ijikọ na webụsaịtị ma ọ bụ ibe weebụ na-abụghị igwe igwe, igwe kwụ otu ebe anaghị anọchi anya ma ọ bụ gosi na ọ kwadoro weebụsaịtị ma ọ bụ ibe weebụ dị otú ahụ. Ọ bụ gị na-ahụ maka ịkpachara anya ka ọ dị mkpa iji chebe onwe gị na sistemu kọmputa gị pụọ na nje, ikpuru, ịnyịnya Trojan na ọdịnaya ndị ọzọ na-emerụ ahụ ma ọ bụ na-emebi emebi. bikehike na-ekwupụta ọrụ ọ bụla maka mmerụ ahụ ọ bụla sitere na iji weebụsaịtị na ibe weebụ na-abụghị igwe igwe.
Mmebi Nwebiisinka na amụma DMCA. Dịka igwe kwụ otu ebe na-arịọ ndị ọzọ ka ha kwanyere ikike ikike ọgụgụ isi ya, ọ na-asọpụrụ ikike ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị kwenyere na ihe dị na ma ọ bụ jikọọ na bikehike.org na-emebi ikike nwebisiinka gị, a na-agba gị ume ka ị gwa igwe kwụ otu ebe dịka iwu iwu nwebisiinka Digital Millennium Digital ("DMCA") siri dị. bikehike ga-azaghachi ọkwa niile dị otú ahụ, gụnyere dị ka achọrọ ma ọ bụ kwesịrị ekwesị site na iwepu ihe mebiri emebi ma ọ bụ gbanyụọ njikọ niile na ihe mmebi ahụ. igwe kwụ otu ebe ga-akwụsị ịnweta na ojiji nke weebụsaịtị ma ọ bụrụ na, n'okpuru ọnọdụ kwesịrị ekwesị, onye ọbịa ahụ kpebisiri ike ịbụ onye na-emebi ikike nwebiisinka ma ọ bụ ikike ọgụgụ isi ndị ọzọ nke igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ndị ọzọ. N'ihe banyere nchupu dị otú ahụ, igwe kwụ otu ebe agaghị enwe ọrụ inye nkwụghachi nke ego ọ bụla akwụburu na igwe kwụ otu ebe.
Arịa ọgụgụ isi. Nkwekọrịta a anaghị enyefe gị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ akụ ọgụgụ isi nke ndị ọzọ, yana ikike niile, aha na mmasị na ihe onwunwe dị otú ahụ ga-adịgide (dị ka n'etiti ndị otu) naanị na igwe kwụ otu ebe. bikehike, bikehike.org, akara ngosi bikehike.org, na ụghalaahịa ndị ọzọ niile, akara ọrụ, eserese na akara ejiri mee njikọ na bikehike.org, ma ọ bụ Weebụsaịtị bụ ụghalaahịa ma ọ bụ ụghalaahịa edenyere n'akwụkwọ ikikere nke igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ndị nyere igwe igwe ikike. Ụghalaahịa ndị ọzọ, akara ọrụ, eserese na akara ngosi ejiri na weebụsaịtị nwere ike ịbụ ụghalaahịa nke ndị ọzọ. Iji webụsaịtị ahụ enyeghị gị ikike ma ọ bụ ikike imepụtagharị ma ọ bụ jiri igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ụghalaahịa ndị ọzọ.
Mgbasa ozi. igwe kwụ otu ebe nwere ikike igosipụta mgbasa ozi na blọọgụ gị ma ọ bụrụ na ịzụrụ akaụntụ enweghị mgbasa ozi.
Njirimara. bikehike nwere ikike igosipụta njikọ njikọ dị ka 'Blog na bikehike.org,' onye edemede isiokwu, na njirimara font n'okpuru blọgụ gị ma ọ bụ ogwe ngwaọrụ.
Ngwaahịa mmekọ. Site na ịgbalite ngwaahịa mmekọ (dịka isiokwu) site na otu n'ime ndị mmekọ anyị, ị kwenyere na usoro ọrụ onye otu ahụ. Ị nwere ike ịpụ na usoro ọrụ ha n'oge ọ bụla site n'iwepụ ngwaahịa mmekọ.
Aha ngalaba. Ọ bụrụ na ị na-edebanye aha ngalaba, na-eji ma ọ bụ na-ebufe ngalaba aha mbụ edebanyere aha, ị na-ekweta ma kwenye na iji aha ngalaba ahụ dịkwa n'okpuru iwu nke Ụlọ Ọrụ Ịntanetị maka Aha Ekenye na Ọnụ Ọgụgụ ("ICANN"), gụnyere ha. Ikike na ọrụ ndebanye aha.
Mgbanwe. igwe kwụ otu ebe na-echekwa ikike, na naanị ikike ya, ịgbanwe ma ọ bụ dochie akụkụ ọ bụla nke Agreement a. Ọ bụ ọrụ gị ịlele Nkwekọrịta a kwa oge maka mgbanwe. Ịga n'ihu iji ma ọ bụ ịbanye na webụsaịtị na-esochi biputere mgbanwe ọ bụla na Agreement a bụ nnabata nke mgbanwe ndị ahụ. bikehike nwekwara ike, n'ọdịnihu, na-enye ọrụ ọhụrụ na/ma ọ bụ atụmatụ site na webụsaịtị (gụnyere, ntọhapụ nke ngwaọrụ na akụrụngwa ọhụrụ). Ụdị njirimara na/ma ọ bụ ọrụ ọhụrụ a ga-edobe n'okpuru usoro na ọnọdụ nke Agreement a.
Nkwụsị. bikehike nwere ike ịkwụsị ohere ị nweta ihe niile ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke weebụsaịtị n'oge ọ bụla, na-enweghị ihe kpatara ya, ma ọ bụ na-enweghị ọkwa, dị irè ozugbo. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ịkwụsị Agreement a ma ọ bụ akaụntụ bikehike.org gị (ọ bụrụ na ị nwere otu), ị nwere ike ịkwụsị iji weebụsaịtị. N'agbanyeghị nke ahụ e kwuru n'elu, ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ọrụ akwụ ụgwọ, ụdị akaụntụ ahụ nwere ike ịkwụsị naanị site na igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ị mebie Agreement a n'ụzọ anụ ahụ ma ghara ịgwọ ụdị mmebi ahụ n'ime ụbọchị iri atọ (30) site na ọkwa igwe kwụ otu ebe nye gị ya; Ọ bụrụhaala na, igwe igwe kwụ otu ebe nwere ike ịkwụsị weebụsaịtị ozugbo dịka akụkụ nke mmechi nke ọrụ anyị n'ozuzu. Nkwanye niile nke Nkwekọrịta a nke sitere na ọdịdị ha kwesịrị ịlanarị nchupu ga-adị ndụ na njedebe, gụnyere, na-enweghị oke, onyinye nwe, nkwenye akwụkwọ ikike, ụgwọ na njedebe nke ụgwọ.
Disclaimer nke akwụkwọ ikike. Enyere webụsaịtị “dị ka ọ dị”. igwe kwụ otu ebe na ndị na-ebubata ya na ndị nyere ya ikike na-ajụ ikike ụdị ọ bụla, nke egosipụtara ma ọ bụ nke egosipụtara, gụnyere, na-enweghị mmachi, ikike nke ịzụ ahịa, mma maka otu ebumnuche na enweghị mmebi. Enweghị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ndị na-ebubata ya na ndị nyere ya ikike, na-enye akwụkwọ ikike ọ bụla na Weebụsaịtị ahụ agaghị enwe njehie ma ọ bụ na ịnweta ya ga-aga n'ihu ma ọ bụ akwụsịghị akwụsị. Ị ghọtara na ị na-ebudata ma ọ bụ na-enweta ọdịnaya ma ọ bụ ọrụ site na webụsaịtị n'ikike na ihe egwu gị.
Mmachi nke ibu. N'ọnọdụ ọ bụla, igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụ ndị na-ebubata ya ma ọ bụ ndị nyere ikike, ga-abụ ndị a ga-akwụ ụgwọ n'ihe gbasara isiokwu ọ bụla nke nkwekọrịta a n'okpuru nkwekọrịta ọ bụla, nleghara anya, ụgwọ siri ike ma ọ bụ usoro iwu ọzọ ma ọ bụ nke ziri ezi maka: (i) ihe ọ bụla pụrụ iche, mmebi ma ọ bụ mmebi; (ii) ọnụ ahịa nke ịzụ ahịa maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dochie anya; (iii) maka nkwụsị nke ojiji ma ọ bụ mfu ma ọ bụ mmebi nke data; ma ọ bụ (iv) maka ego ọ bụla karịrị ụgwọ ị kwụrụ maka ịnya igwe kwụ otu ebe n'okpuru nkwekọrịta a n'ime ọnwa iri na abụọ (12) tupu ihe kpatara ya. igwe kwụ otu ebe agaghị enwe ụgwọ maka ọdịda ma ọ bụ igbu oge n'ihi ihe karịrị ikike ha nwere. Ihe a e kwuru n'elu agaghị emetụta ruo n'ókè nke iwu nwere ike machiri.
Nnọchite anya izugbe na akwụkwọ ikike. Ị na-anọchite anya ma nye ikike na (i) iji weebụsaịtị gị ga-agbaso iwu nzuzo nke igwe kwụ otu ebe, yana nkwekọrịta a yana iwu na ụkpụrụ niile dị (gụnyere enweghị mmachi ọ bụla iwu ma ọ bụ ụkpụrụ mpaghara na obodo gị, steeti, obodo). , ma ọ bụ mpaghara gọọmentị ọzọ, gbasara omume ịntanetị na ọdịnaya a na-anakwere, yana gụnyere iwu niile metụtara gbasara nnyefe data teknụzụ ebupụ na United States ma ọ bụ obodo ị bi) na (ii) iji weebụsaịtị agaghị emebi ma ọ bụ mebie ikike ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ ọ bụla.
Indemnification. Ị kwenyere n'ịkwụghachi ma jide igwe kwụ otu ebe na-adịghị emerụ ahụ, ndị ọrụ ya, na ndị nyere ya ikike, na ndị isi ha, ndị ọrụ ọrụ, ndị ọrụ na ndị nnọchiteanya sitere na na megidere ebubo na mmefu ọ bụla, gụnyere ụgwọ ndị ọka iwu, na-esite na iji weebụsaịtị gị. gụnyere mana ọnweghị oke na mmebi nke nkwekọrịta a.
Dị iche iche. Nkwekọrịta a bụ nkwekọrịta niile dị n'etiti igwe kwụ otu ebe na gị gbasara isiokwu a, ma enwere ike gbanwee ya naanị site na ndezigharị ederede nke onye isi oche igwe kwụ otu ebe bịanyere aka na ya, ma ọ bụ site na bikehike nke ụdị edegharịrị. Ewezuga oke iwu dị, ma ọ bụrụ na ọ bụla, na-enye ma ọ bụghị, Nkwekọrịta a, ohere ọ bụla ịnweta ma ọ bụ ojiji nke Weebụ ahụ ga-achịkwa iwu nke steeti California, USA, ewezuga usoro iwu megidere ya, yana ebe kwesịrị ekwesị maka ya. esemokwu ọ bụla na-esite na ma ọ bụ metụtara nke ọ bụla ga-abụ ụlọ ikpe steeti na gọọmenti etiti dị na San Francisco County, California. Ewezuga nkwuputa maka enyemaka ma ọ bụ enyemaka ziri ezi ma ọ bụ nkwupụta gbasara ikike ikike ọgụgụ isi (nke enwere ike weta ya n'ụlọ ikpe ọ bụla tozuru oke na-enweghị ikesa nkekọ), esemokwu ọ bụla na-ebilite n'okpuru nkwekọrịta a ga-emecha dozie ya n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ mkpezi ikpe zuru oke nke Ụlọikpe Arbitration na Mediation Service, Inc. ("JAMS") site n'aka ndị na-ekpe ikpe atọ họpụtara dịka Iwu ndị dị otú ahụ siri dị. Mkpebi a ga-ewere ọnọdụ na San Francisco, California, n'asụsụ Bekee na enwere ike ịmanye mkpebi ikpe n'ụlọ ikpe ọ bụla. Ndị na-emeri emeri n'omume ọ bụla ma ọ bụ usoro iji kwado nkwekọrịta a ga-enwe ike ịnweta ụgwọ na ụgwọ ndị ọka iwu. Ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla nke Nkwekọrịta a emeghị nke ọma ma ọ bụ enweghị ike ime ya, a ga-atụgharị akụkụ ahụ ka ọ gosipụta ebumnuche mbụ nke ndị otu ahụ, akụkụ ndị fọdụrụ ga-anọgide na-arụ ọrụ zuru oke na mmetụta. Mwepu nke otu ọ bụla nke okwu ma ọ bụ ọnọdụ nke nkwekọrịta a ma ọ bụ mmebi ya, n'otu oge ọ bụla, agaghị ahapụ okwu ma ọ bụ ọnọdụ ma ọ bụ mmebi ọ bụla na-esote ya. Ị nwere ike kenye ikike gị n'okpuru nkwekọrịta a n'aka ndị ọ bụla kwadoro, ma kwenye ka ejiri ya, usoro na ọnọdụ ya; igwe kwụ otu ebe nwere ike ịnye ikike ya n'okpuru Agreement na-enweghị ọnọdụ. Nkwekọrịta a ga-adịgide adịgide ma ga-enweta uru nke ndị otu ahụ, ndị ga-anọchi ha na ọrụ ndị enyere ikike.
Nwebiisinka © 2022 BikeHike.